30 Nzira dzekusimudzira Yako Blog
Chipiri, Gunyana 23, 2012 Chipiri, Gunyana 23, 2012 Douglas Karr
Isu tinogara tichiudza vatengi vedu kuti hazvina kukwana kungo nyora blog zvinyorwa. Kana tsamba yako yangonyorwa, unofanirwa kuzivisa vateereri kuti zviripo… izvi zvinogona kuitwa kuburikidza nekudhinda chiziviso paTwitter, paFacebook, kuchibatanidza kune mamwe masayiti, kutumira tsamba yako yevanogamuchira email, uye kuendesa kune yekumaka bookmark nzvimbo dzese kwese. Vazhinji vanhu havadzokere kune saiti zuva nezuva uye vashoma vanozonyorera kune chako chikafu. Zvakawanda uye nekuwedzera, vanhu vari kuvimba nekiratidziro yemagariro avo pasocial network. Saka… kana iwe uchida kuti zvako zvemukati zviwanikwe, zvemukati zvako zvinoda kukurukurwa mukati meaya maratidziro!
Hedzino 30 nzira dzekusimudzira yako blog mablog uye kutyaira yakawanda traffic kune yako blog kubva Kutanga Ita Rufaro.
Tags: blog kusimudziraBloggingkusimudzira zvemukatikubatanidzwa blogging
Sesu! Ongororo yeVashandisi paBrand Engagement
Gumiguru 23, 2012 na12: 25 PM
Ndatenda zvikuru nekugovana izvi!
Gumiguru 23, 2012 na4: 09 PM
Hukuru infographic, @andreealaunchgrowjoycom: disqus! Uye kusimudzira kiyi kune chero zano rezvemukati.
Frugal Guru Nhungamiro
Dzakati wandei idzi dzinopesana neTOS yemasocial media saiti, uye vamwe vanowana iwe uchirangwa neGoogle.
Kushandisa maforamu inzira yakanaka yekudzidza, kugovana, uye kusimudzira panguva imwe chete! Ingo rangarira kuburitsa ako akanakisa zvinhu pane yako wega saiti pamberi pese pese.
Branding inotamba chinzvimbo chikuru mukubudirira kweblog. Zvemagariro midhiya zvinobatsira zvakanyanya mukumaka.
Ndira 18, 2016 na1: 32 PM
Ndatenda kune yakadai yakajeka infographic. Zvemagariro midhiya, chaiye mutsigiri!
Chokwadi chikuru chinyorwa nezve blog kusimudzira.
Kuti timhanye blog nemazvo, Tinofanirwa kunge tine vamwe vaverengi uye kuwana vaverengi venguva dzose, Tinofanirwa kusimudzira mablog edu nguva dzose.
Kukwidziridzwa kweBlog kwakanyanya kukosha mazuva ano. Isu tinofanirwa kuve nekwanisi yekukwezva vaverengi maziso.
Ini ndinonyatsoda nzira yeblog pormotion yawakatsanangura pano uye ini ndinobvumirana zvachose newe. Nekutevera matekinoroji aya, Tinogona kutyaira vaverengi venguva dzose pane yedu blog.
Sekufunga kwangu, kuti tigare tichiverenga vaverengi vakavimbika, Tinofanirwa kunyora zvemhando yepamusoro uye kuita zvemukati nekuti zvemukati ndizvo chete zvinhu zvinogona kukwezva vaverengi kubva kwakasiyana masosi angave enhau enhau kana eemail kusvika. Zvemukati zvinofanirwa kuve nesimba rekukwezva vaverengi.
Pamwe pamwe nenzvimbo idzi, mapoka epaFacebook ane zvakare mukana wakakura. Tinogona kutyaira yakakura traffic uye vaverengi kubva kumapoka aya Kana isu takanyora zvinotyisa zvemukati.
Ndiri kufara kuti iwe wakafukidza yakadaro yakanaka chinyorwa. Kutenda nekugovana nesu. 😀